Home › What's New › Press Note-16 February, 2017
Press Note-16 February, 2017
The Embassy of India in Yangon, Myanmar in coordination with Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti (BMVSS), Jaipur and U Nu Daw Mya Yi Foundation (UNDMYF) in Yangon is organizingasocial camp for artificial limb fitment for the disabled in Myanmar on February 16, 2017 (Thursday) at Pitakat Thonbon Nikae Monastery, Pale yadanar Street, 26thWard in South Dagon Township. The purpose of organizing this camp is physical, economic and social rehabilitation of the disabled, and to help them regain mobility and dignity, thereby assisting them leadanormal life in the society.
The camp is funded entirely by the Indian Embassy in Myanmar withagrant from the Government of India in the Ministry of External Affairs, New Delhi, while technology and other assistance required for the camp is provided by Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti (BMVSS) with the assistance of U Nu Daw Mya Yi Foundation (UNDMYF).
The Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti, Limb Centre, S.M.S. Hospital/ Medical Colleage, Jaipur, India isanon-governmental, voluntary, non-religious, non-sectarian, non-political Society for helping the handicapped. It was set up by Mr. D.R. Mehta in March 1975 asalong-term human welfare projects. It has 22 branches all over India in Bikaner, Jodhpur, Kota, Bharatpur, Ajmer, Pali, Udaipur, Hyderabad, Ambala, Srinagar, Indore, Chennai, Patna, Ahmadabad and many more cities. The society supplements efforts in making disabled persons functional by providing artificial limbs, calipers, other aids and appliances, economics assistance free of charge.
The Jaipur limb is an efficient prosthesis enabling,aperson walk normal without support, run, rideabicycle and even climbatree. Patients can, after fitment, return to work in fields, factories, shops and offices. BMVSS has held over 50, on-the-spot, limb fitment camps in 26 foreign countries like Afghanistan, Bangladesh, Indonesia, Lebanon, Nigeria, Nepal, Nairobi, Pakistan, Panama, Philippines, Somalia, Sudan, Zambia, and Zimbabwe to benefit landmine victims and others.
BMVSS is the world largest organization for the disabled. Its activities have so far benefited over 1.55 million disabled.
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံသံရုံး၊ရန်ကုန်မြို.သည် Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samaiti (BMVSS), Jaipur, India နှင့် ဦးနု ဒေါ်မြရီ ဖောင်ဒေးရှင်း၊ တို့နှင့်ပူးပေါင်းကာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ မသန်စွမ်းများကို ခြေတုတပ်ဆင်ပေးရေးအတွက် လူမှုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းတခုအား တောင်ဒဂုံမြိုံ့ နယ်၊ ၂၆ရပ်ကွက်၊ ပုလဲရတနာလမ်းတွင် တည်ရှိသော ပိဋကတ်သုံးပုံ နိကာယ်စာသင်တိုက်၌ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၆ရက် (ကြာသပတေးနေ့) တွင်ကျင်းပပါသည်။ ဤအစီအစဉ်အား ပြုလုပ်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ မသန်စွမ်းများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့အား မူလအတိုင်းပြန်လည်မြှင့်တင်ပေးရန်အပြင် ၎င်းတို့ ၏လှုပ်ရှားသွားလာနိုင်မှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာတို့ကို ပြန်လည်ရရှိပြီး လူမှုဝန်းကျင်တွင် ပုံမှန်ရပ်တည်နိုင်စေရန် အတွက်ကူညီပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဤခြေတုတပ်ဆင်ပေးရေးလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သောငွေကြေးအကူအညီအား အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရ၊ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ နယူးဒေလီ၏ ခွင့်ပြုသဘောတူညီမှုဖြင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံသံရုံး၊ ရန်ကုန်မြို့မှထောက်ပံ့ပေးပြီး နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် အခြားလိုအပ်သော အထောက်အပံ့များအား ဦးနု ဒေါ်မြရီ ဖောင်ဒေးရှင်း နှင့် Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samaiti (BMVSS), Jaipur, India တို့မှပံ့ပိုးကူညီပေးပါသည်။
Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samaiti, Limb Centre, S.M.S Hospital/Medical Colleage, Jaipur, India သည် ကာယ/ဥာဏမသန်စွမ်းသူများအား ကူညီရန် အတွက် အစိုးရ မဟုတ်သော၊ အခကြေးငွေမယူသော၊ ဘာသာရေးနှင့် မဆက်နွယ်သော၊ ဂိုဏ်းဂဏ အစွဲမရှိသော၊ နိုင်ငံရေးနှင့် မပတ်သက်သော အဖွဲ.အစည်းတခုဖြစ်သည်။ ဤအဖွဲ.အစည်းကို ၁၉၇၅ ခုနှစ် မတ်လတွင် Mr.D.R. Mehta မှ လူသားတို့ဘဝ သာယာပျော်ရွှင်မှုအတွက် ရေရှည်စီမံကိန်းများအဖြစ် တည်ထောင် ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏မြို.ကြီးများဖြစ်သော Bikaner, Jodhpurm Kota, Bharatpur, Ajmer, Pali,Udaipur, Hyderabad, Ambala, Srinagar, Indore, Chennai, Patna, Ahmadabad တို့နှင့်အခြားမြို.ကြီးများတွင် ဤအဖွဲ.အစည်း၏ရုံးခွဲပေါင်း (၂၂) ခုခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ဤအဖွဲ.အစည်း၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများမှာ မသန်စွမ်းသူများအား လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အတွက် ခြေတုများ ၊ ခြေထောက်မသန်သူများအတွက် ဘေးဒေါက်များ၊ အခြားအထောက်အကူပြုပေးသည့် ကိရိယာတန်ဆာပလာများကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် အခမဲ့တပ်ဆင်ပေးခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
ဤအဖွဲ.အစည်း၏ Jaipur ခြေထောက်များသည် ခြေတုတပ်ဆင်ထားသော လူတယောက်ကို အထောက်အကူမပါဘဲပုံမှန် လမ်းလျှောက်နိုင်ရန်၊ ပြေးရန်၊ စက်ဘီးစီးရန်နှင့် သစ်ပင်တက်ရန်တို့အတွက် အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်သော ခြေတုများဖြစ်သည်။ ထိုခြေတုများတပ်ဆင်ထားသူများသည် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်သော လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ စက်ရုံများ၊ ဈေးဆိုင်များ၊ ရုံးများဆီသို့ ပြန်လည်သွားရောက် လုပ်ဆောင်နိုင်ပေသည်။ BMVSS သည် အာဖဂန်နစ္စတန် ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ လက်ဘနွန်၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ နီပေါ၊ နိုင်ရိုဘီ၊ ပါကစ္စတန်၊ ပနားမား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဆိုမာလီယာ၊ ဆူဒန်၊ ဇန်ဘီယာ နှင့်ဇင်ဘာဘွေ စသည့်နိုင်ငံပေါင်း (၂၆) နိုင်ငံတွင် တနေရာထဲတွင်အပြီးအစီး ခြေတုတပ်ဆင်ပေးခြင်းကို နေရာပေါင်း (၅၀)ကျော်တွင် ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
BMVSS သည် မသန်စွမ်းသူများအတွက် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအဖွဲ.အစည်းကြီးဖြစ်ပြီး ယခုအချိန်ထိ မသန်စွမ်းသူပေါင်း ၁.၅၅ သန်းကျော်တို့အာ အကျိုးပြုပြီးဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၆ရက်။